Home » News » Wisycom Goosahaa Mashruuca Maareynta Muuqaalka Muuqaalka / Mashiinka Boom Adam Bloch
Wisycom Goosahaa Mashruuca Maareynta Muuqaalka Muuqaalka / Mashiinka Boom Adam Bloch
BUFFALO, NOVEMBER 7, 2018 - Waxsoosaarka Sound Mixer / Booteeyaha Boom Adam Bloch ayaa dhowaan lagu xilsaaray isagoo qabsanaya dhammaan codadka adag, ee soo wajahda maqalka si ay u eegto xerada tababarka ee koox kubada cagta ee Buffalo. Inagoo rajeynayna in uu yahay mid aan macquul ahayn marka laga reebo wadahadal la'aan, Bloch wuxuu ku tiirsanaa qalabka ugu dambeeya ee wireless-ka, Wisycom MCR42S Nidaamka Dhexdhexaadinta ee Labada Dhexdhexaad ah UHF Mini Qalabka Qaadashada iyo MTP41S Dhiirigelinta Baasaboorka Gawaarida.
Bloch waxaa markii ugu horreysay loo soo bandhigay Wisycom saaxiibteed iyo saaxiibka Randy Sparrazza, oo ahaa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee qaata astaanta caanka ah ee Maraykanka waxana uu noqday mid ka mid ah danjiraha shirkadda. "Waxaan la shaqeynay Randy oo ah filim muusiko ah, wuxuuna igu adkeeyay inaan isticmaalo qalabka, waxaan ku adkaystay inay yihiin kuwa ugu fiican" ayuu yiri Bloch. "Sureey ku filan, waan ku faraxsanahay. Maxaa Witscom u sarreeya dusha sare waa in shirkad kaliya oo bixisa kala duwanaanshaha dhabta ah labada kan, taas oo ah arrin weyn oo aniga ii. Waxaa sidoo kale jira siyaabo yar oo aad u jajabin kartid tayada codkaaga, taas, illaa iyo inta aan ogahay, ma sameyn kartid nooc kale oo kale. Wisycom waa shirkadda kaliya ee runtii ku qancisa baahidayda. "
Qorshaha xeryaha tababarka, oo ka dhacay St John John Fisher College, Bloch waa inuu soo jiito codad la isku haleyn karo oo ka socota saddexda kubadood ee kubada cagta oo maalin kasta la isticmaalo, marka lagu daro codka laga helo xafiisyada tababarayaasha, qolalka sariiraha, filimada iyo goobo kale oo xarumo kale ah. Bloch wuxuu taagnaa maqalkiisa maqalka ee qaybta ugu sareysa laba ka mid ah saddexda goobood. Wuxuu isticmaalay antennas wuxuu hoosta ka xariiqay mid kasta oo ka mid ah, oo kuxirnaa wixii la duubay marxalad kasta oo la siiyay, waxay filimkoodu caadi ahaan 300 ku socdeen 450 cagaha isaga oo ka fog xarunta. Waxaa jiray xitaa waqtiyo ay ciyaartoydu u socon lahaayeen qolalka saqafka inta ay micnd yihiin, Bloch ayaana wali qaadi kara codka.
"Xitaa iyada oo loo marayo dhismayaal qaas ah, derbiyada lebiska iyo in ka badan fogaha 700 fogaan, marwalba waan maqli karaa," ayuu ku daray Bloch. "Xaqiiqdii, markii shaqsiyaadka kamaradleyda ah ay heli doonaan dhinaca kale ee garoonka, way i maqli kari waayeen iyaga, laakiin wali waan maqli karaa ciyaartoyda. Taasi waa sida wanaagsan ee qalabka Wisycom waa. "
Sida laga soo xigtay Bloch, farqiga u dhexeeya Wisycom iyo shirkadaha tartanka ku jira waa "habeen iyo maalin" maadaama codku yahay mid cad oo aan lahayn jahwareer. "Iyada oo qalabkeeyga Wisycom, weli ma helin meel aanan ku heli karin isbeddellada dhabta ah ee isticmaalka," ayuu sii waday. "Taasi waxay si gaar ah u haysaa saldhigga gurigeyga ee Buffalo iyo Rochester, kuwaas oo ku baahiyay meelo raadiyaha iyo agagaaraha biyaha ee deriska - Lake Erie iyo Lake Ontario - taas oo kakoobi karta isbeddellada oo ay ku adkeyn karto si ay u qabato maqalka. Inuu haysto awooda Wisycom iyo awoodda uu u doorto inta uu ku hareereysan yahay faragelintaan suurtogalka ah, isla markaana weli awood u leh inuu qabsado codadka gudaha dhismaha 700 fog, waa mid caan ah. "
Bloch waxay taageertaa soo-qaadayaasha Wisycom MCR42S iyo MTP41s-da waxeey ku jiraan kuwa loo yaqaano Sanken COS-11 iyo Microfone Countryman B3, Microphones Sennheiser MKH 416 iyo Audix SCX-1HC Kondenser Microphones, Qalabka Sound 688 SL-6 qasacad / rikoodh. Waxa kale oo uu ku tiirsan yahay qoryaha boomadaha K-Tek, bacda isku dhafan, daboolka iyo qalabka.
Marka laga soo tago masaafadeeda, kala duwanaansho la'aanta iyo kalsoonida, Bloch ayaa sidoo kale doorbideysa cabirka cabirka Wisycom. "Uma maleyneyso in rubuc ka mid ah inji in uu sameeyo farqi weyn, laakiin arin yar oo ka mid ah MTP41 waxay ka dhigeysaa mid aad u raaxo badan oo sahlan in la jeebeeyo," ayuu yiri Bloch. "MTP41s sidoo kale ma kululaan, halka kuwo kale oo aan horay u isticmaalay in ay kululeeyaan."
Ka dib markii uu bishii ku qaatay tababarka xerada, hal shay ayaa si cad u cadeeyay Bloch. "Waxaan hadda ogahay in ciyaartoyda kubada cagta ee kubada cagta lagu xalin karo iyadoo xiraneysa gawaarida Wisycom iyo qalabka weli shaqeyn doona ganaax. Intii lagu jiray cayaaraha xili ciyaareedka, mid ka mid ah ciyaartoyda micraanka ah ayaa si aad ah u dhibsaday. Waxa uu si toos ah ugu soo degay kubada cagta, waxaana uu ku jiray xanuun badan oo uusan xitaa helin garabkiisa garabkiisa dhamaadka ciyaarta. Laakiin, gabi ahaanba wax dhibaato ah ma lahan mid ka mid ah qalabka Wisycom. "
Wixii ku dhowaad toban sano, Bloch wuxuu u shaqeeyay qalab isku dhafan iyo shaqaale kor u dhaafaya filimyo muuqaal ah, dokumentar iyo xaqiiqada TV-ga. Waxaa ku jira darajooyinkii ugu dambeeyay Jacaylka Kadib Ka Dib, Masters of Woodhouse, Brook Cold, Pointing for Widows Point iyo Meelaha ugu Weyn Caalamka ee Argagixisada, kuwo kale oo badan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Bloch ayaa laga heli karaa halkan.
Wisycom waa naqshadeeye a iyo dhise oo ka mid ah xal RF ugu casri ah, waayo, warbaahinta, filim iyo wax soo saarka live, caanka ah ee ay cimri dherer, dabacsanaan, isku halaynta, farsamaynta iyo dhibcood kharash-ool ah qiimaha. habka design Wisycom ee la eryay by fiiro gaar ah u faahfaahsan, warcelin macaamiisha iyo tayada kama dambaysta ah, ka doorashada ka mid ah qaybaha in nidaamka wax soo saarka, kaas oo ka dhici dhirta shirkadda ee Talyaaniga. Shirkadda faantaa on adeegaya sida la taliye farsamo iyo qofka macaamiisha kasta. From design caadadiisu qiimaynta iyo dimensioning nidaamyada, kooxda Wisycom ku adkeysato macaamiisheeda iyada oo tallaabo kasta oo nidaamka. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo www.wisycom.com.
Broadcast Engineer Broadcast Engineering isgaadhsiinta Spears & Fiilooyinka Ultra HD Forum Video Engineer wisycom	2018-11-08
Previous: ATEME Waxay u suurtagelisaa VSTV K + si loo kordhiyo Kaydinta iyo Dakhliga Bandwidth
Next: V-Nova PERSEUS Plus oo laga heli karo Telestream Encoding Solution